Samba: Mpizara mahaleo tena ao amin'ny 1 2 3 | Avy amin'ny Linux
Salama namana !. Omeko anao ny famintinana mafy ny fomba fampiharana server irery ao Debian amin'ny alàlan'ny Console sy Text Editor ihany.
Dingana teo aloha hahatsapanao ny fetrany sy / na ny fahasarotan'ny interface interface izay misy mba hampiharana serivisy mitovy amin'izany, ary manasa anao aho hanandramanao.
Tsy manery olona hampiasa ny fomba voalaza eto izahay. Izahay ihany dia mizara ny zavatra kely niainantsika tamin'io lafiny io. Tena manokana aho mino fa mora kokoa ny mizara lahatahiry amin'ny Linux amin'ny fampiasana ny console sy text editor.
Betsaka ny lahatsoratra ao amin'ny tranonkala momba ny fomba fampiasana fitaovana sary toa ny System-Config-Samba amin'ny Ubuntu, SWAT, Gadmin-Samba, Zentyal-Samba amin'ny Ubuntu, sns.
Manoro hevitra anao izahay hahita, hametraka, hampiasa ary handalina azy ireo, ary avy eo mampitaha azy ireo amin'ny fomba tsotra naroso eto. Araka ny lazainay any Kiobà, Manaova fanatsoahan-kevitrao manokana.
Ny fomba dia azo ampiasaina amin'ny milina mihazakazaka amin'ny Debian, na ny milina birao na ny mpizara.
Raha misy fanontaniana, vakio ny lahatsoratra teo aloha «Samba: Mpizara irery ao amin'ny Debian»Na mijery ny antontan-taratasy.
1.- Mametraka sy manamboatra ny Samba izahay
2.- Mamorona ny mpampiasa ao amin'ny ekipanay izahay ary manampy azy ireo ao amin'ny angon-drakitra Samba.
3.- Mamorona lahatahiry izahay hizarana sy hisaintsainana azy ireo ao anaty rakitra /etc/samba/smb.conf.
Ao amin'ny ohatra dia hamorona ireo mpampiasa izahay ka TSY AZO atomboka ny session eo an-toerana amin'ny solosaintsika. Hoforoninay koa izy ireo tsy misy fampirimana manokana. Azavainay ihany koa ny antony TSY ampiasainay pdbedit hanampiana azy ireo ao amin'ny tahiry mpampiasa Samba.
1 Tambajotra an-trano
2 1.- Mametraka sy manamboatra ny Samba izahay
3 2.- Mamorona ny mpampiasa ao amin'ny ekipanay izahay ary manampy azy ireo ao amin'ny angon-drakitra Samba.
4 3.- Mamorona lahatahiry hizara sy hisaintsaina azy ireo ao amin'ny rakitra /etc/samba/smb.conf izahay
Farafaharatsiny iray amin'ireo PC dia hametraka Linux :-), ary Debian manokana. Ohatra, hofidintsika ny pc-son, satria ny Zanaka, izay antsoina hoe Pepito (Jaimito amin'ny latitude hafa), dia fo amin'ny Free Software ary mianatra momba izany. Indraindray izy dia miresaka amin'ny Ray momba ny tombony azo amin'ny SWL, saingy ity farany amin'ny ankapobeny dia miteny aminy hoe "Manana traikefa betsaka noho ianao aho, ary ny an'ny Libre ... dia tsy maharesy lahatra ahy." Avy eo ny Zanaka dia namaly hoe "Raiko, tsarovy fa ny Windows 7 dia kopia piraty ...". Tsy misy, zava-pianakaviana. 🙂
Hardware: pc-reny, pc-ray, pc-vavy ary pc-son
Subnet: 192.168.1.0 / 255.255.255.0
Vondrona asa: TRANO
mpampiasa: reny, ray, zanaka vavy sy zanakalahy
Ireto data manaraka ireto izay mety hamaha ireo anarana ao anaty tamba-jotra dia tsy maintsy ampidirintsika ao anaty rakitra Tompon'ny maro, ao amin'ny ekipa tsirairay. Amin'ny tranga Linux dia ny rakitra dia / etc / hosts, raha any Windows dia matetika ao C: \_ Windows \_ System32 \_ Drivers \_ sns \_ mpampiantrano.
192.168.1.15 pc-ray aman-dreny
Amin'izany no hamonjentsika ny fametrahana sy ny fametrahana DNS. Na izany aza, na iza na iza te-hanao dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ny toro-lalana «Master Master voalohany .... ".
Ny vondrona miasa ao amin'ny ekipa Debian no hanambara izany ao anaty rakitra /etc/samba/smb.conf. Ao amin'ny Windows, nambara tao amin'ny MyPc Properties. Ny adiresy IP an'ny solosaina Windows tsirairay dia ambara ao amin'ny Properties of the Network Connection.
Hamarino raha mandeha tsara ny zava-drehetra hatreto, amin'ny solosaina ampiasaintsika ping remote-pc-anarana ary ny solosaina lavitra dia tokony hamerina ny fangatahana. Raisinay ho azy fa hainay ny manamboatra tambajotran-trano kely. Ny tanjon'ny fanaovana azy dia tsy tanjon'ity lahatsoratra ity. Azonao atao ny manontany ny namana efa mahalala. Ny toro-hevitra tena ilaina ihany no nomenay.
: ~ # aptitude mametraka samba smbclient: ~ # cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.original: ~ # dpkg-reconfigure samba
: ~ # testparm: ~ # service samba restart: ~ # smbclient -L localhost -U: ~ # smbclient -L localhost -U% Domain = [HOME] OS = [Unix] Server = [Samba 3.6.6] Sharename Type Comment ----- ---- ------- pirinty $ Disk Printer Drivers IPC $ IPC Serivisy IPC (mpizara pc-zaza) Domain = [HOME] OS = [Unix] Server = [Samba 3.6.6] Server Komento ---- ------- PC-Son pc-son mpizara Workgroup Master --------- ------- HOME PC- Ton
naoty: Raha tsy mahazo tsara ny vokatra etsy ambony ianao dia miandrasa minitra vitsy. Ary koa, raha tsy misy mpizara WINS amin'ny tambajotra, amboary ny rakitra /etc/samba/smb.conf ary soraty ny tsipika # mandresy fanampiana = tsia ary avelao toy izao: mandresy fanampiana = eny. Mihazakazaha toy ny mpampiasa faka: testparm ary avy eo samba fanompoana avereno.
adduser --no-mamorona-trano --shell / bin / adduser ny ray aman-dreny diso --tsy mamorona-trano --shell / bin / mpiorina tsorakazo sandoka --tsy mamorona trano --shell / bin / adduser zaza diso - -tsy mamorona-trano - zaza / bin / zaza diso
Raha te hanamarina ny tsy famoronana lahatahiry manokana ianao dia mihazakazaha nohavaozina ary avy eo mitadiava ray aman-dreny o mitadiava reny. Raha te hijery ihany koa ianao raha afaka miditra amin'ny masinina eo an-toerana ireo mpampiasa noforonina dia andramo atao mivantana na amin'ny alàlan'ny ssh.
Maninona isika no tsy mampiasa pdbedit hanampiana ireo mpampiasa ekipa ao Samba?.
Raha manatanteraka isika lehilahy pdbedit, ary mamaky momba ny safidy izahay -a | –create Tena nohazavaina tsara fa manampy mpampiasa an'i Samba, fa izay NO miantso ny UNIX Password Syndromeization Script. Lavitra, pdbedit tsy maintsy antsoin'ny mpampiasa foana faka na amin'ny alalanao.
Raha ao amin'ny rakitra fikirakirana Samba lehibe /etc/samba/smb.conf dia nambara fampidirana tenimiafina unix = eny, izay ny masontsivana default, pdbedit hanavao ny angon-drakitra ao amin'ny tahiry mpampiasa Samba fotsiny izy io ary TSY hanao izany ao amin'ny tobin'ny ekipa, izany hoe ao anaty rakitra / sns / aloka.
Tekinika kely fa izany no izy. Na izany aza, "smbpasswd » SI ampio ny mpampiasa ary ampifanaraho eo noho eo ny teny miafiny, amin'ny alàlan'ny Script Syn synalisation. Ka ndao hampiasa smbpasswd mba tsy ho voafandrika amin'ny tongotry ny soavaly. 🙂 Ny mpampiasa anay voalohany nanampy an'i Samba dia faka.
smbpasswd-faka faka smbpasswd - ray smbpasswd -reny reny smbpasswd - zanakalahy smbpasswd - zanaka vavy
Ankehitriny RAHA hampiasa ilay baiko isika pdbedit ho an'ny fanamarinana. Raha mila fanazavana fanampiny dia mihazakazaka lehilahy pdbedit. Izahay dia tsy afaka manome ny valiny rehetra amin'ny lahatsoratra iray na amin'ny andiany iray manontolo. Samba dia tena lehibe tokoa.
: ~ # pdbedit -L root: 0: root root: 1002: vavy: 1004: ray: 1001: son: 1003 :: ~ # pdbedit -Lv
Ho fanamorana, ampidirinay ao amin'ilay vondrona daholo ny mpampiasa noforonina mpampiasa. Tena mety amin'ny lahatahiry ho an'ny daholobe misy alàlana hamaky na hamaky / hanoratra fotsiny. Ny vondrona mpampiasa dia karatra bibidia.
: ~ # mpampiasa mpisera adduser: ~ # mpampiasa zanaka vavy mpanararaotra: ~ # mpampiasa mpisera adduser: ~ # mpampiasa zaza mpanampy: ~ # kely / sns / vondrona | mpampiasa mpampiasa grep: x: 100: ray, reny, zanaka lahy, vavy
Hatreto dia Ok ny zava-drehetra mifandraika amin'ny famoronana mpampiasa.
3.- Mamorona lahatahiry izahay hizarana sy hisaintsainana azy ireo ao anaty rakitra /etc/samba/smb.conf
Amin'ny ankapobeny dia mitovy amin'ny navoaka tao amin'ny ny lahatsoratra teo aloha.
Ohatra 1: Tianay ny mizara ilay fampirimana / trano / zanaka / mozika ho an'ny mpampiasa ny trano rehetra. Ny fahazoan-dàlana dia ho vakiana fotsiny. Voalohany indrindra dia mamorona fampirimana izahay / trano / zanaka / mozika ary amboarinay ny tompony sy ny alalana raha ilaina izany. Amin'ny maha mpampiasa azy hijo manatanteraka izahay:
mkdir / trano / zaza / mozika ls -l / trano / zaza | mozika grep
Mba hanitsiana ny fisie Samba misy alàlana amin'i faka, manery izahay ALT + F2 ary manatanteraka izahay gksu gedit /etc/samba/smb.conf, manoratra ny teny miafin'ny faka, ary ampio ity manaraka ity amin'ny faran'ny fisie:
[pc-child-music] comment = làlana fampirimana mozika manokana = / trano / zaza / mozika vakiana fotsiny = Eny mpampiasa manan-kery = lisitry ny mpamaky @users = @users
Aorian'ny fanovana ny rakitra dia manatanteraka izahay testparm amin'ny maha mpampiasa azy hijo ary averinay indray ny serivisy ho faka. Azontsika atao ihany koa ny mihazakazaka ny baiko roa toa faka:
serivisy testparm samba reload
Mba hijerena ny serivisy vao namboarina dia azontsika atao amin'ny alàlan'ny fampiharana ity baiko manaraka ity amin'ny solosaina mihitsy:
Ohatra 2: Tianay ny mizara ilay fampirimana / trano / zanaka / mozika ho an'ny rehetra. Ny fahazoan-dàlana dia hovakiana / hosoratana ho an'ny hijo ary mamaky irery ihany ho an'ny sisa amin'ny fianakaviana voaangona ao amin'ilay vondrona mpampiasa. Tsy mila manova ny tompony na ny alalana amin'ny fampirimana izahay. Manova ny fizarana fizarana ao anaty rakitra fotsiny izahay smb.conf.
[pc-child-music] comment = làlana fampirimana mozika manokana = / trano / zaza / mozika vakiana fotsiny = Tsy misy mpampiasa manan-kery = @ mpampiasa lisitra manoratra = lisitra vakiana zaza = @users
Ohatra 3: Ny rain'i Pepito dia faly amin'ny andian-tsarimihetsika ary efa manana ny kapila mafy ao an-tampony. Nangataka tamin'ny zanany lahy izy mba hamela toerana eo amin'ny masininy mba hamenoany azy amin'ilay andian-tantara, ary koa hataony azon'ny fianakaviana rehetra atao.
Nanaiky i Pepito, mazava ho azy, satria tamin'izany fomba izany dia afaka mangataka amin'ny rainy izy mba hividy fiara mafy 2-tera hafa, izay ny nofinofiny. Pepito dia azo antoka fa hanisy hatezerana ny rainy amin'ny namonjeny azy peso vitsivitsy tamin'ny fametrahana ilay Windows 7 piraty. 🙂
Si manatanteraka toy ny faka:
mkdir / trano / zaza / andian-dahatsoratra -R faka: mpampiasa / trano / zaza / andiana chmod -R g + ws / trano / zaza / andian-dahatsoratra ls -l / trano / zaza | andiana grep
[pc-son-series] fanehoan-kevitra = làlan'ny andiany Dada = / trano / zanakalahy / andian-dahatsoratra vakiana fotsiny = Tsy misy mpampiasa manan-kery = @ mpampiasa lisitra manoratra = raim-pianakaviana, lisitra famakiana raim-pianakaviana = @users force create mode = 0660 mode directeur de force = 0770
Hamarininay avy hatrany ny syntax fototra an'ny smb.conf ny alalan ' testparm ary mamerina mamerina ny serivisy amin'ny alàlanay izahay fanompoana samba famerenana. Afaka mihazakazaka koa isika smbclient -L localhost -U%. ao amin'ny masinin'i Pepito, na smbclient -L pc-zaza -U% avy amin'ny solosaina hafa ao an-trano izay nametraka Linux, ary koa ny fonosana smbclient.
Ary izany dia natao ho an'ny androany ry Namana !!!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Samba: Server tsy miankina ao amin'ny 1 2 3
Programmer ao amin'ny Visual FoxPro ... mandatsa-dranomaso aho ...
Ny tomany dia ho an'ny fotoana mahafinaritra eh? Foxpro dia tahaka an'i Elvis, mbola velona ihany izy. Ataoko amin'ny divay amin'ny Debian toy ny be indrindra izany. Misaotra tamin'ny hevitrao !!!
Julio Liborio dia hoy izy:
Ny ahy ny hevitro voalohany dia ny milaza hoe "Fanamarihana tena tsara", Andro faly. !!!
Valiny tamin'i Julio Liborio
Fanazavana tena tsara, mora sy tsotra.
Torohevitra 100%, mampiasa an'io fomba io koa aho, ary amin'ny console, dia tsotra sy haingana be io.
Tena tsara. Tsy mety ho fitarihana tsara kokoa ny fanaovana lahatahiry zaraina ho an'ny Windows avy any Debian.
Misaotra antsika rehetra tamin'ny fanehoan-kevitra sy ny fandraisana tsara ny lahatsoratra !!!
Tsy misy kilema. Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara. Tena hampiasaina io.
Fandraisana anjara tena tsara, hanampy ahy handao ny filaminana = mizara
Security = Share dia fomba fiarovana tsy ankatoavin'ny ekipa Samba araka ny aseho amin'ny antontan-taratasin'izy ireo. Faly aho fa nanompo anao ilay lahatsoratra ka nafoinao ny fampiasana an'io fomba io. Security = Mpampiasa no maody maody. Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra.
Voalazako hatrany, fanabeazana be dia be ny hafatrao ary hazavaina tsara, araka ny filazanao ary toa ahy, tsara kokoa ny manamboatra samba amin'ny tanana fa tsy amin'ny interface tsy mandeha tsara akory ny asa, ny hafatrao dia tena tsara, tohizo toy izao. hotahin'Andriamanitra ianao, arahaba
@Erick, manandrana manoratra lahatsoratra amin'ny fomba tsara aho ary hahatratra ny ankamaroan'ny mpamaky. Heveriko ho toy ny zavatra hafa rehetra, indraindray aho mahazo azy ary indraindray tsy manao. Misaotra hatrany ny rehetra !!!.
Lahatsoratra tena tsara, raha tsy mahazo aina aho dia mampiasa syste-config-samba, ary mora kokoa ho ahy 🙂
System Config Samba, avy amin'ny Ubuntu sy distros hafa, dia tsy mamaha ny olan'ny fahazoan-dàlana amin'ny lahatahiry. Toy ny fitsipika ankapobeny, ny olona mampiasa azy, dia manome fahazoan-dàlana 777 amin'ny lahatahiry ary fomba iray ifampizarana amin'ny fomba XP tsy misy mpanara-maso ny faritra, izay avelanao hisy hamaky sy hanoratra. Amin'ny farany, inona no mety ho sarotra kokoa noho ny olan'ny fahazoan-dàlana dia tsy maintsy ataonao amin'ny tanana izany raha mila filaminana kely ianao. Raha tsy tena ilaina ity farany dia manan-kery ny fomba. Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra !!!
Lahatsoratra tsara, milaza fotsiny fa rehefa mamorona vondrona ao amin'ny Windows dia mahita ireo solosaina mandrafitra ny tamba-jotra izy.
Fanontaniana iray, ahoana raha mampiasa DHCP amin'ny terminal rehetra aho, sendra manana fitaovana maro mifandray tsy misy tariby aho ary mandà ny hanome azy ireo adiresy mijanona, misaotra.
Miala tsiny amin'ny fanemorana ny famaliana, fa teo vao tsapako ny hevitrao. Heveriko fa raha mampiasa DHCP ianao dia tsy maintsy manambara ny mpizara samba linux anao hiasa ho mpizara WINS, ary amin'ny DHCP dia ampifanaraho ny subnet sy ny elanelana arakaraka ny masontsivana ao amin'ny tambajotrao.
Raha tsy izany dia jereo ny antontan-taratasy Samba momba azy: "Samba3 - Howto", toko 48 DNS sy DHCP Configuration Guide.
Mpinamana lahatsoratra mahatahotra.
Nizara ihany koa aho tamin'ny alàlan'ny terminal, haingana kokoa ho ahy izany, saingy nanana olana foana aho ary tao amin'ny solosaina Windows dia tsy nahita ny solosainako mihitsy ilay mpikaroka tambajotra, fa raha niditra ny ip mivantana aho, raha afaka nitety ny lahatahiry zaraina avy amin'i Samba.
Raha tsy izany dia diso aho ary mijery eto, ny olako dia ny tsy fampidirana ny rakitra mpampiantrano amin'ny solosaina roa ???
Eny, lahatsoratra tena tsara, tiako be izany.
asen007 dia hoy izy:
Tena tsara tokoa, ity ary ireo fandraisana anjara hafa amin'ny samba izay angoniko mba hataoko ho mpizara rakitra toa ahy ny famonjena ahy rehefa newbie ny iray, ankasitrahana izany.
Mamaly an'i asen007
Misaotra @ asen007. Noho izany dia manoratra izahay amin'ny fanantenana fa hahasoa izany. Faly aho fa manampy anao amin'ny zava-bitanao io. Miarahaba anao !!!
Fotoana iray indray misaotra tanteraka ... Debianero de cora ... 😀
Ny sasany izay vaovao ao amin'ny GNOME 3.10